ကျွန်ုပ်တို့၏အမြန်ဝင်ခွင့်လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ » Hodges University
အနာဂတ် Hawks ကြိုဆိုပါတယ်!
Hodges U မှကြိုဆိုပါသည်။ သင်၏ပညာရေးကိုတိုးချဲ့ရန်ရွေးချယ်ခြင်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပြီးမေးခွန်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ Hodges U နှင့်အတူမင်းကိုမင်းဖုံးထားပြီ
ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်မီသောကောလိပ် ၀ င်ခွင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူးများသည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုကျောင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင်ရွှေ့ပြောင်းရာတွင်ကူညီလိမ့်မည်။ သင်သည်ဘွဲ့လွန်၊ ဘွဲ့ကြို၊ ESL သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုစိတ် ၀ င်စားသည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ကောလိပ်အတွေ့အကြုံမှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိနေသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ င်ခွင့်ဆိုင်ရာအကြံပေးနှင့်စကားပြောပါ။
လက်ခံခြင်း၊ တိမ်းညွတ်မှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ မင်းအဲဒီမှာနီးနေပြီ
အဆင့် ၁ - သင်၏လျှောက်လွှာကိုတင်ပါ
၀ င်ခွင့်လျှောက်လွှာတွင်ပထမအဆင့်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုတင်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုအွန်လိုင်းမှတင်ပြခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည် အစာရှောင်ခြင်း application ကို သို့မဟုတ် Fort Myers ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းဝင်းသို့သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်။
အဆင့် ၂ - သင်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ င်ခွင့်ဆိုင်ရာအကြံပေးနှင့်ဆက်သွယ်ပါ
သင်သည်သင်၏မြန်ဆန်သောလျှောက်လွှာကိုအွန်လိုင်းမှတင်ပါကသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ၀ င်ခွင့်ဆိုင်ရာအကြံပေးသည်သင်၏အနာဂတ်ကို Hodges U တွင်ဆွေးနွေးရန်အချိန်သတ်မှတ်ရန်ဖုန်း၊ စာသားနှင့် / သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ ဤဆွေးနွေးမှုကိုဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Fort Myers ကျောင်းဝင်း။
နိဒါန်းဆွေးနွေးမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Hodges တက္ကသိုလ်သည်သင်၏အဆင့်မြင့်ပညာရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်သင့်တော်မှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် Hodges တက္ကသိုလ်မှသင်၏ပညာရေးအတွက်ထုံးစံလမ်းကြောင်းကိုပူးပေါင်းရန်တည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်ပြီးဆုံးသည်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လျှောက်လွှာကိုအပြီးသတ်နိုင်မည်၊ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတင်သွင်းပြီးသင်၏လျှောက်လွှာကြေးပေးမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းပေါ်တယ်သို့ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်၏လျှောက်လွှာကိုကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ကိုယ်တိုင်တင်သွင်းပါကအဆင့် ၁ နှင့် ၂ ကိုပေါင်းနိုင်သည်။
လှမ်း3- သင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းပါ
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများသည်သင်၏စိတ် ၀ င်စားမှုအစီအစဉ်၊ ပညာရေးဆိုင်ရာသမိုင်း၊ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့်နိုင်ငံသားအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏ကျောင်း ၀ င်ခွင့်အကြံပေးသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှတစ်ဆင့်သင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
အဆင့် ၄ နှင့်အထက် - လက်ခံခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ မင်းအဲဒီမှာနီးနေပြီ
လျှောက်လွှာတင်ပြီးသည်နှင့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်သည်လက်ခံမှုကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ သင်၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ သင်သည်တရားဝင် Hodges U တွင်တရားဝင်စာရင်းသွင်းခံရပါမည်။
အချို့သောအစီအစဉ်များသည်အထက်ပါ ၀ င်ခွင့်အဆင့်များအပြင်အထူးကျောင်းအပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်သည်။ အသေးစိတ်အစီအစဉ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
BSN - သူနာပြု
Hodges တက္ကသိုလ်အတွက်မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကျောင်းသားအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား နှင့် ကျောင်းသားများ၏မကျေနပ်ချက် ကျောင်းသားလက်စွဲစာအုပ်တွင်တွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ.
ပြည်နယ်ခွင့်ပြုချက်အပြန်အလှန်လက်ခံရေးသဘောတူညီချက် (SARA) အရပြည်နယ်ပြင်ပအဝေးသင်ကျောင်းသားများအတွက်တိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ခွင့်ပြုချက်ပြန်လည်ရရှိရေးသဘောတူညီချက်မှသင်ကြားမှုမဟုတ်သောမကျေနပ်ချက်များကိုအယူခံဝင်နိုင်သည်။ (FL-SARA) Postsecondary အပြန်အလှန်ပညာရေးညှိနှိုင်းရေးကောင်စီ (PRDEC) မှာ FLSARAinfo@fldoe.org.
တိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောနောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ FL-SARA တိုင်ကြားမှုလုပ်ငန်းစဉ် ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ။